Wasiirka Amniga Ee Juba-Land oo ka Hadlay Xiisada Beladxaawo | Malinle :: Latest News Breaking, Somali News
April 20, 2019 22:01:06
26th December 2017 No comment
Kismaayo-Malinle= Wasiirka Amniga Jubbaland, C/rashiid Xasan C/nuur (Janan), ayaa si adag kaga hadlay xadgudubka Kenya ee ku aadan Degmada Baled Xaawo ee Gobolka Gedo, kadib markii darbiga ay ka dhiseyso xuduuda labada dal, ay gudaha u soo gelisay qaybo ka mid ah degmadaasi.
Arrintan, ayaa ka careysiisay bulshada ku dhaqan Degmada Baled Xaawo, waxayna Sabtidii dhigeen bannaanbaxyo rabshado wata, iyagoona gacmaha ula tagey Ciidanka Kenya.
Wasiirka Amniga Jubbaland oo Isniintii gaaray Degmada Baled Xaawo, ayaa kula kulmay Maamulka Degmada iyo qaybaha bulshada, waxaana uu u sheegay inaanan Kenya looga aamusi doonin xadgudubkeeda ka dhanka ah dhulka Soomaaliya.
Wasiirka, ayaa sheegay ka shakhsi ahaan, Maamulka Jubbaland iyo Dowladda Soomaaliyaba in aanay jirin wax ay kala socdaan dhul cabirka, ay Ciidanka Kenya ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha degmadaasi.
Wasiirku waxaa uu bulshada u sheegay inaysan jirin wax raali ah oo Dowladda Kenya looga yahay inay qaadato taako ka mid ah dhulka Soomaaliya, isla-markaana ay ka dhiidhin doonaan in xaafado ka mid ah Degmada Baled Xaawo ay Kenya ku darsato dhulkeeda.
By Warar Sugan 23rd December 2017
Dhageyso Sir ku saabsan maamulka hawada Somali (Maxamed Abukar ayaa ka shekeynaya)
By Warar Sugan 22nd December 2017